आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री अहिलेसम्म पाएनौं - Karobar National Economic Daily
आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री अहिलेसम्म पाएनौं
query_builderJune 13, 2017 11:41 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility5152
शंकरप्रसाद कोइराला पूर्व अर्थमन्त्री
२५ वर्ष निजामती सेवामा रहेर सचिवबाट अवकाश भएका शंकरप्रसाद कोइराला दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि गठित तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा ११ महिना अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसमेत बनेका थिए । उद्योग मन्त्रालयको शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेका कोइराला सहसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जाने पहिलो व्यक्ति हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा, एसियाली विकास बैंक, पर्यटन, ऊर्जा, सञ्चार, जलस्रोत र नेपाल ट्रस्टको कार्यालय गरी विभिन्न पद र विषयगत मन्त्रालयमा भूमिका निर्वाह गरेका कोइरालासँग वैदेशिक सहायता परिचालन, पर्यटन र जलस्रोतको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभव छ ।
जलस्रोत, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग तथा निर्वाचन आयोगमा सचिवका रूपमा काम गरेका कोइराला त्रिभुवन विश्वबिद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक तथा फिलिपिन्सबाट एमएस विषयमा स्नातकोत्तर हुन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियालेका कोइराला राजनीतिक र व्यवस्थापकीय कारणले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको र त्यसको सुधार स्थीर सरकार भएपछि मात्रै हुने दाबी गर्छन् ।
निजी क्षेत्र र सरकारबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेमा मुलुकले चाहेको आर्थिक बृद्धिदर सहजै हासिल गर्न सकिने बताउने कोइराला अवकाशपछिको जीवनमा पनि उत्तिकै व्यस्त छन् । उनै कोइरालासँग सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, कार्यान्वयन र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानी :
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
यो संघीय स्वरूपको पहिलो बजेट हो । यसलाई मैले अहिलेको राजनीतिक सरकारले ल्याएको गैरराजनीतिक बजेटका रूपमा लिएको छु । यसमा राजनीतिक नारा, लोकप्रिय कार्यक्रम नआए पनि मुलुकले अहिलेसम्म अवलम्बन गरेका नीति, प्राथमिकता तथा कार्यक्रमलाई यसले स्रोत–साधनको राम्रैसँग व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणका हिसाबले यो बजेट पहिलो पटक आएको हो । यसले आर्थिक विकाससँगै विकास–निर्माणमा सघाउ पु¥याउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
बजेटले लिएको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न हाम्रो स्रोत–साधन पर्याप्त छ ?
यो हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हो । यीबाहेक दुई–तीनवटा चुनौती मैले देखेको छु । जस्तो कि, सन् २०३० सम्म मध्यस्तरीय अर्थव्यवस्था बनाउँछौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छौं । अर्को, २०२२ सम्म अल्पविकसितबाट स्नातक हुन्छौं भनेका छौं, त्यो पनि चुनौतीपूर्ण छ ।
त्यसले गर्दा सरकारी लगानी र पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने अवस्था छ भने पुँजी निर्माणमा लाग्नुपर्ने अवस्था पनि छ । चालू आवमा ६.९४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्यौं यो एउटा सकारात्मक पाटो हो । गत वर्षचाहिँ हाम्रो वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत मात्र थियो ।
यो पटक आर्थिक गतिविधिहरू राम्रै भएका छन्, लोडसेडिङ पनि हटेको छ । औद्योगिक कृषि उत्पादन तथा सेवाक्षेत्रको पनि राम्रै वृद्धि हासिल गरेको छ । भूकम्पपछिको गतिविधि सुस्त भए पनि गति लिएको छ । यो वर्षकै आर्थिक वृद्धिदरको आधारमा लक्ष्य ठूलो भए पनि आगामी वर्षका लागि बजेटले लिएको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संघीय बजेट र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै हामी संघीयतामा प्रवेश ग-यौं, अब यसले हाम्रो आर्थिक विकासलाई कता पु-याउला ?
हाम्रो संविधानले राज्य शक्तिको तीन तहका स्रोत–साधनको बाँडफाँडको निक्र्योल गरिदिएको छ । कुन कुरा स्थानीय सरकारले गर्ने, कुन कुरा प्रादेशिक सरकारले गर्ने, कुन केन्द्रीय सरकारले गर्ने भनेर लक्ष्मण रेखा कोरिदिएको छ । त्यहीअनुसार नै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोगका अनुसार अनुदानहरू त्यहाँ जाने व्यवस्था छ भने अर्को स्थानीय तहले आफ्नो सीमाभित्र रहेर थप स्रोत–साधनको खोजी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यसले गर्दा लुकेर रहेका आर्थिक सम्भावनाहरू, स्रोत–साधन संकलनका कुरा नै बढेर आउँछन् जस्तो मलाई लागेको छ । त्यस्तै प्रादेशिक सरकारले पनि केन्द्रले दिने अनुदानको भर नपरेर आफूभित्र रहेका सम्भावनाहरू खोज्नुपर्ने भएकाले उसले पनि त्यो सम्भावना खोज्छ । अर्को प्रदेश–प्रदेश बीच वा स्थानीय तहबीच निर्माण, विकास तथा जनजीविकाको भावनाका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । त्यसैले बदलिँदो यो विशिष्ट परिस्थितिमा आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन्छन् कि भन्ने लागेको छ ।
संघीयता लागू भएसँगै राज्यलाई आर्थिक रूपमा भार पर्छ नै । त्यो भार हामीसँग भएको स्रोतसाधनले थेग्न सक्छ ?
तत्काल नै सक्छ भनेर सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्ने बेला भएको छैन । स्वरूप, संरचना सबै नयाँ छ । भौतिक पूर्वाधार, सेवा सुविधाहरू नै सिर्जना गर्नुपर्ने छ । त्यसमा पहिलो पटक हाम्रो पुँजीगत खर्च निकै हुने देखेको छु । त्यसैगरी स्थानीय तहलाई चाहिने संरचना तथा पूर्वाधारका लागि जनप्रतिनिधिलाई दिने सेवासुविधाले राज्यलाई एकै पटक ठूलोे भार पर्ने देखिएको छ ।
यसलाई अलि कम गर्ने गरी मितव्ययिता अपनाउन सकिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि रि–करेन्ट या भनौं महŒवाकांक्षी नभईकन खर्च गरेर देखायौं भने अहिलेदेखि सहज हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । होइन भने यसले साधारण खर्चमा प्रशस्त चाप पर्ने र विकास–निर्माणका काम नहँुदा पुँजीगत खर्चमा सम्झौता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हामीकहाँ भएको स्रोतसाधनलाई कसरी उपयोग गर्न सकिएला ? जसबाट मुलुकले आर्थिक विकासका लागि आधारशिला तयार गर्न सक्छ ?
स्रोतसाधनका लागि हाम्रो मुलुकले लिएको नीति प्राथमिकता र कार्यक्रमहरू सही दिशामा गएजस्तो मलाई लाग्छ ।
खासगरी भौतिक निर्माणको विषयमा, सडक सञ्जाल, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउने, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर बनाउने, सिँचाइका आयोजनाहरू बनाउने हिसाबमा राज्यले सही दिशा नै लिएजस्तो लाग्छ । त्यस्तै अर्को कुरा, जलविद्युत्को क्षेत्रमा राज्यले लिएको नीति पनि ठीकै लाग्छ र त्यसको नतिजा पनि सकारात्मक आइसकेको छ । त्यसैले केन्द्रमा कुनै दुविधा मान्नुपर्ने म देख्दिनँ ।
भोलिका दिनमा संघीय संरचनामा गइसकेपछि, प्रादेशिक सरकार आइसकेपछि, स्वायत्त भइसकेपछि आपसी द्वन्द्व नहोस्, त्यतातर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । स्रोतको बाँडफाँड, प्राकृतिक स्रोतको विषयमा अलिकति द्वन्द्व हुने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न सक्यौं र ती स्रोतसाधनको सही ढंगले उपयोग भयो भने मुलुकले आर्थिक विकासका लागि आधारशिला तयार गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
केन्द्रीय अधिकार गाउँमा जाने त भयो, तर यसले एकआपसमा द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा पैदा भयो भनिन्छ, यहाँलाई त्यस्तो लाग्दैन ?
हामीले विकेन्द्रीकरणको कुरा विगत पाँच दशकदेखि गर्दै आयौं । त्यो सफल हुन सकेन । राज्यको पुनर्संरचना भएपछि जुन राज्यका तीनवटा शक्ति छन् ती सबै स्थानीय तहमा गएको अवस्था छ ।
त्यसलाई बलियो बनाउन हामी लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । स्थानीय तहलाई हामीले दिएका २२ वटा अधिकार छन् । ती पर्याप्त हुन् भन्ने नै मलाई लाग्छ र केन्द्रले पनि नहेरी नहुने अर्थिक नीति, परराष्ट्र, रक्षाका कुरा समष्टीगत मुलुकका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रादेशिक सरकार बनाउँदै छौं, प्रादेशीक संसद्हरू बनाउने भनेका छौं, त्यहाँनेर चाहिँ द्वन्द्व आउने हो कि भन्ने डर छ । स्थानीय तहलाई सक्षम, गतिशील बनाएको धेरै राम्रो हो, राज्यको आवश्यकता पनि हो । तर, प्रादेशिक सरकारको प्रभावकारिताका विषयमा हामीले अलिकति गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संघीयतासँगै कर्मचारी व्यवस्थापन पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ नि ?
यसलाई संविधानमै लेखिएको छ । भइरहेकै कर्मचारी संयन्त्रलाई लाने भन्ने कुरा संविधानले प्रस्ट बोलेको छ । कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकार दुवैलाई दिएको छ ।
तर, भएका कर्मचारीलाई उनीहरूको योग्यता, क्षमता र इच्छाअनुसार समायोजन गर्ने पहिलो दायित्व हो । भोलि हामीलाई चाहिने जनशक्तिका लागि बाटो खुला राख्नुपर्छ, अर्को कुरा लोकसेवामार्फत जाने संयन्त्र बनायौं भने राम्रो र पारदर्शी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसके पनि प्रशासनिक झमेला उत्तिकै देखिएको छ । आवश्यक नीतिनियमहरू बनिसकेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा काम गर्ने वातावरण कसरी सहज होला ?
जनप्रतिनिधिदेखि त्यहाँ जाने कर्मचारीलाई तालिमको आवश्यकता छ, त्यसमा राज्यले जोड दिनुपर्छ । राज्यले जनशक्ति परिचालनको कुरा त ल्याएको छ, तर निजामती सेवामा तालिमको पर्याप्त व्यवस्था छैन । राज्यपक्षबाट, सरकार पक्षबाट तयारी पुगेन । निर्वाचन हुनु पहिले नै त्यहाँ खटाउने कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने थियो, त्यो भएन ।
जनप्रतिनिधिलाई पनि काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन । यस विषयमा राज्यले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने थियो । चुनावअघि सम्भव हुन सकेन । जनप्रतिनिधिलाई पर्याप्त तालिम चाहिन्छ । यो विषयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कदम चालिसकेको छ ।
यहाँ पूर्वप्रशासक तथा पूर्वअर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, राजनीतिकदेखि कर्मचारीतन्त्रका यावत् समस्याबारे जानकार हुनुहुन्छ । सरकारले अधिकतम प्रयास गर्दा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था जहिले पनि निराश हुन्छ, किन ?
यसमा पहिलो कुरा राजनीति नै हो भने दोस्रो कुरा व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर हुनु हो । यदि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भएको भए भनौं या जुन अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउँछ त्यही अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न पाएको भए उसले आफूले पढेका धेरै कुरा लागू हुन्थे । दुर्भाग्यवश हामीले त्यस्ता अर्थमन्त्री पाएका छैनांै, आफूले पढेको बजेटको कार्यान्वयन सोही अर्थमन्त्रीले गरोस् ।
उदाहरणका लागि अहिले आएका नयाँ मन्त्रीले अघिल्ला अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट असार मसान्तसम्म कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने, यसअघिका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट फेरि साउनदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विडम्बना छ ।
सरकारको शीघ्र परिवर्तनले गर्दा राजनीतिक अनिश्चितताको सिकार विकास खर्चमा गएर जोडिएको छ । त्यो मेरो पहिलो निष्कर्ष हो । एउटै प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष देश चलाउने अवस्था नआएसम्म यसमा हामीले सम्झौता गरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा, हाम्रा व्यवस्थापकीय स्तरमा पनि धेरै कमी–कमजोरी छन् ।
एउटा त आयोजना पनि हामी सही रूपले छान्दैनौं । पूर्वतयारी पनि राम्रो गर्दैनौं । आयोजना कार्यालय पनि राम्ररी खोल्दैनौं । आयोजनामा पठाउने कर्मचारी पनि राम्रो भन्दा हाम्रो पठाउँछौं । त्यसपछि हाम्रो विभिन्न प्रशासनिक, कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता र झैझमेला त्यहाँ भएकाले हाम्रो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सा¥है कमजोर भएको अवस्था छ । त्यसबाहेक यस पटकको बजेटले पनि केही कुरा ल्याएको छ ।
केही प्रक्रियागत कुरा पनि छन् । सबैभन्दा सुन्दर पक्ष कार्यक्रम स्वीकृति, अख्तियारी कर्मचारी व्यवस्थापन र अनुगमन–मूल्यांकनमा झैझमेला थिए, ती सम्बोधन भएको अवस्था छ । आगामी दिनमा अलिकति सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
नेपालको विकासमा कर्मचारीतन्त्र बाधक छ भन्ने सुनिन्छ, तपार्इं मान्न तयार हुनुहुन्छ ?
राजनीतिक तहले एउटा दृष्टिकोण दिन्छ, कार्यक्रम ल्याउँछ तर कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्मचारीलाई नै जिम्मा लगाउँछ । सबै मुलुकको अभ्यास यही नै हो । तर, हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले विकासका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । यो सत्य हो । यदि सही ढंगले यो संयन्त्र परिचालित हुन सक्यो भने विकास–निर्माणमा कर्मचारी संयन्त्र बाधक होइन, सहयोगी भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्छ ।
त्यसको उदाहरण बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि २०४८ मा आएको पहिलो निर्वाचित सरकार थियो । त्यो तीन वर्षमा हासिल गरिएका आर्थिक–सामाजिक विकास र त्यसका परिसूचकहरू हेर्न अनुरोध गर्छु । अर्को, दोस्रो जनआन्दोलनपछि आएको विकासको लहर थियो, त्यो पनि सकारात्मक नै थियो ।
त्यसैले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई सही रूपले प्रयोगमा ल्याएको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता भनौं या ल्याकत भनौं कर्मचारीतन्त्रमा छ जस्तो मलाई लाग्छ । यसको प्रयोग राम्रो हुन सकेन । विकास–निर्माणका आयोजनामा कमजोरी छन्, प्रक्रियामुखी काम छ । यसले दिएको शतप्रतिशत काम सम्पन्न गरेको अवस्था देखिँदैन ।
ट्रेड युनियन हावी भयो भन्ने पनि छ नि ?
निजामती सेवामा टे«ड युनियन आवश्यक थिएन, यो अनपेक्षित हो । यसले गर्दा केही समय द्वन्द्व आएकै हो । सरकारमा बसेका मान्छेले कारखानामा बसेका मान्छेजस्तो मालिक र मजदुरबीचको सम्बन्ध नभए पनि जो देखियो । त्यसको अभ्यास सफल हुन सकेन ।
केही समय अलमलिएको अवस्था थियो । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका औद्योगिक सम्बन्धको कुरा भनौं, सरकारभित्रकै आधिकारिक ट्रेड युनियनको कुरा भनौं, नकारात्मक भूमिकाचाहिँ कम भएजस्तो लाग्छ । जनचेतना पनि आएकाले टे«ड युनियनले सकारात्मक भूमिका खेल्दै गएको मैले महसुस गरेको छु ।
यहाँले निजी क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो, कर्मचारीको हैसियतमा भनौं या मन्त्रीको हैसियतमा रहँदा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य पनि गर्नुभएको छ । सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक भनिरहँदा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन नि ?
जब मुलुकले आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो, बजारउन्मुख अर्थतन्त्रको गति लियो, त्यतिबेलादेखि निजी क्षेत्र र सरकार सहयात्रीकै भूमिकामा छन् । यस्तो अवस्था भइसक्यो कि निजी क्षेत्र र सरकार एक–अर्काका परिपूरक भएका छन् । तर, यदाकदा विश्वासको संकट पैदा भए पनि पछिल्लो बजेटले निजी क्षेत्रबारे बोलेको छैन । हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई बिर्सेर अघि बढ्न सकिँदैन ।
निजी क्षेत्रसँग जोडिएका, व्यापार–व्यवसायसँग जोडिएका विषयहरू यस पटकको बजेटमा सम्बोधन नभएकै हुन् । यदि सरकार र निजी क्षेत्र सँगै बसेर यात्रा नगरेसम्म हाम्रो मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । खासगरी सरकारले पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत संरचना निर्माण र समन्वय सरकारले गर्ने हो । विगतमा हामीले निजी क्षेत्रलाई महŒव दिएकै अवस्था हो । सहुलियतदेखि उत्प्रेरणा हौसला दिने कुरामा बजेट चुकेको छ ।
विकासका कुरा गछौं तर हामी जहिले पनि विकासमा पछि पर्छौं, यहाँले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ । नेपालमा औद्योगिक विकास हुन नसक्नुको कारण के हो ?
राज्यले उदार नीति लिइसकेपछि हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले हासिल गरेको तीव्र आर्थिक वृद्धिदर र हाम्रो जस्तो बढी लागत भएको अवस्थामा पनि ठूलो सफलता हो । विभिन्न समस्या भौतिक पूर्वाधार श्रमसम्बन्ध विद्युत्, राजनीतिक अस्थिरतालगायतका विभिन्न कारणले मुलुक औद्योगिक क्षेत्रभन्दा व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्दैन ।
लगानीको वातावरण समय सापेक्षित ऐन–कानुनको तर्जुमासँगै हाम्रा वस्तुहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनमा ध्यान दिनु जरुरी छ । हाम्रा वस्तुहरू प्रतिस्पर्धी हुन सके मात्रै बजार पाउँछन्, जसबाट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् र राज्यले लाभ लिन सक्छ ।
अहिलेको मुख्य चुनौती व्यापारघाटा न्यूनीकरण हो भनिन्छ, यसका लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ?
व्यापारघाटा न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । विगतमा गरिएका प्रयासबाट हामी केही वस्तुमा सफल भएका छौं । जस्तो कि सिमेन्ट, चाउचाउ, जुत्तालगायतमा आत्मनिर्भर नजिक पुगेका छौं । त्यो सकारात्मक हो । विद्युत्मा पनि आत्मनिर्भर हुने अभियानमा छौं त्यसपछि निर्यातमा जान्छौं ।
तीबाहेक अन्य वस्तुको पनि उत्पादन बढाएर निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था हो, निर्यात बढाउन त्यति सहज छैन । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका र तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरू हाम्रो मुलुकमा धेरै कम छन् । निकासीको बास्केट आफैंमा सा¥है सानो छ, त्यसमा राख्ने वस्तु उत्पादन पनि धेरै कम छन्, त्यसलाई पनि बढाउनुपर्छ । विगतमा गरिएका प्रयासहरू पर्याप्त भएनन् । अझै सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर निकासी बढाउनमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्दो छ, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?
हरेक वर्ष ३० प्रतिशतभन्दा माथि ३५ प्रतिशतसम्म रेमिट्यान्स बढेको पाइन्छ । बजेटको भोलुम र रेमिट्यान्स उस्तै–उस्तै छ । रेमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्र संगठित रूपमा भनौं या असंगठित रूपमा भनौं, चलायमान छ । त्यसले तत्कालका लागि केही असर पर्ने देखिए पनि दीर्घकालीन असर गर्दैन ।
अर्थ मन्त्रालय बजेट एसियाली विकास बैंक